Propagandy amin’ny haino aman-jery: Tsy mandaitra | mandimby maharo
Propagandy amin’ny haino aman-jery: Tsy mandaitra
Posted on 15 December 2013 16 December 2013 by Mandimby Maharo
30 andro ny faharetan’ny fampielezankevitry ny fihodinana voalohan’ny fifidianana filoham-pirenena teto Madagasikara. Iray volana mialoha ny 25 oktobra nentina nadresena lahatra ny mpifidy mba handratsaka vato ho an’ny kandida izay hitany fa mendrika. Hevitra tokoa no nahely ka dia nampiasaina avokoa izay rehetra afaka mivoy izany hevitra izany.
Fitaovan-tserasera maro no netsehin’ireo kandida nandritra iny fampielezan-kevitra iny. Raha ny fampiasana ireny peta-drindrina ireny dia efa nolazaintsika fa nanemotra ny tamboho sy ny andrin-jiro nanerana ny tanàna izy ireny na dia nisy aza ny toerana natokana ho amin’izany. Fa isan’ireo fitaovana mahazatra koa ny fampiasana ny onja-peo sy fahitalavitra. Nofaritan’ny lalàna moa fa ny kandida tsirairay tamin’iny fifidianana iny dia nanan-jo ny hampiasa ny haino aman-jerim-panjakana dia niarahana nanaiky fa samy nanararaotra izany avokoa ireo kandida ireo. Ny tatitra nataon’ireio mpanaramaso vahiny dia nanamarina izany.
Tatitra vonjimaika nataon’ireo mpanaramaso avy amin’ny Vondrona Eraopeana.
Maro koa nefa ny fahitalavitra sy onja-peo tsy miankina. Tsy voafetra ny lalàna ny fampiasana azy ireny mandritra ny fampielezan-kevitra. Ny hany takina aminy dia ny fanajana ny zo fototry ny tsirairay sy ny fanajana ireo lalàna mifehy ny haino aman-jery andavanandro ihany. Izy ireo koa dia malalaka amin’ny fanoritana ny matoandahatsoratrany. Ary amin’ny maha orinasa azy dia izay mahaloa ny vidin’ny fotoana ampiasaina aminy dia nahazo nandefa ny fampielezan-keviny avokoa. Heverina koa fa isan-ireo fototry ny seraseran’ny fampielezan-kevitra ny fampiasana ny haino aman-jery, ankoatry ny fidinana eny an-kianja sy ny fomba hafa. Ny tatitr’ireny fidinana eny an-kianja ireny koa moa no isan’ny votoatin’ny resaka atao mandritry ny fandaharana any amin’ny haino aman-jery. Manaraka zy eo koa ny fitanisana sy famelabelarana ny drafitrasa sy izay tsara fantara momba ny kandida: ny tantarany, ny fiaviany, ny toetrany sy izay rehetra mety hambabo ny mpifidy rehetra. Izay kandida nanam-bola maro nafahana nanao izany noho izany dia nampiasa azy ireny arak’izay tratrany. Izay nihevitra kosa fa tsy dia ilaina loatra ny fampiasana ny haino aman-jery noho ny fomba hafa dia tsy nanao izany. Maro koa ireo izay tsy dia ampy nenti-nanana loatra, satria dia nampiakatra ny saran’ny fandefasana koa ny ny haino aman-jery rehetra nadritra iny fotoanan’ny fampielezankavitra iny.
Azo nitarafana ny tetik’ady nampiasain’ny tsirairay noho izany ny fandinihana ny atontanisa maneho ny fomba nampiasana ny haino aman-jery. Ao ireo nisafidy ny hametraka izany ho lohalaharana. Ao koa ireo tsy dia niraika loatra tamin’izany ka nampiasa fomba hafa.
Akoatr’izay dia azo hitarafana ny vola nampiasain’ny tsirairay tamin’ireo kandida koa nefa ny fandinihana izany. Afahana mamaritra ny mety ho fandaniana natao nandritra iny fampielezan-kevitra iny.
Fa mampivohitra ny herin’ny serasera eo amin’y safidin’ny olona koa nefa. Ny fisehona amin’ireny fitaovan-tserasera ireny manko dia natao indrindra hisintonana ny saina, ny fon’ny olona mba hifidy ny kandida zatsy na zaroa. Namoaka tatitra momba izany fampiasana ny haino aman-jery tsy miankina nandritra ny fampielezan-kevitra ary ny KMF-CNOE, izay mpanaramaso avy eto an-toerana. Toy izao izany:
Ny fampiasana ny haino aman-jery tsy miankina nandritra ny fampielezankevitra filoha fiodinana voalohany. (Kmf-Cnoe)
Ny kandida Hery Rajaonarimampianina araka izany no nampiasa ny haino aman-jery tsy miankina be indrindra, raha toa ka i Noelson William no tsy tazana indrindra tamin’ireo kandida.
Kandida voatonona matetika tao anatin’ny fotoanan’ny fampahalalam-baovao sy ireo fandaharana novokarin’ireo mpanao gazety ny kandida Hery Rajaonarimampianina. Ity kandida ity izay nahazo salan’isa 16% tamin’ny vokam-pifidianaan, nametraka azy ho faharoa ka afahany miatrika ny fihodinana faharoa. 10% ny fampahalalam-baovao niresahana ny momba azy avokoa. Izy koa ny nampiasa vola be indrindra tamin’ny fandefasana doka vidiam-bola nandritra izany: 40% ny fotoana dia azy avokoa.
Raha oharina amin’ny nampiasan’ny kandida Jean-Louis Robinson, kandida voalohany tamin’ny valim-pifidianana amin’ny salan’isa 21%, dia nilaozany lavitra ity farany. Laharana fahaenina manko ity kandida ny antoko Avana ity tamin’ny fisehoana amin’ny haino aman-jery. 4% ny fotoana ny fampahalalam-baovao ihany no nitanterana ny hetsika sy ny tetik’asan’ity kandida ity. Ary 8% ny vola azon’ny haino aman-jery tsy miankina ihany no avy any aminy.
Ny kandida Hajo Andrianainarivelo kosa no faharoa amin’ny nampiasana ny haino amanjery saingy fahatelo kosa izy teo amin’ny salan’isa 10% azony tany anaty vata fandatsahambato.
Paik’ady samy nanana ny azy.
Raha ireo no dinihina dia hita misongadina fa tsy mahomby ny serasera amin’ny haino aman-jery ho amin’ny fampielezan-kevitra. Antony roa no mety nahatonga izany: na ny fifehezana ny hafatra ampita no tsy nety, na ny olona nampitaina azy mihitsy no tsy azo nobaboina intsony ny saina sy ny fony.
Raha ilay antony voalohany dia sarotra ny hinona fa tsy mahay miserasera ny mpiaramiasa ao amin’ny Hery Vaovao. Orinasan-tserasera matanjaka toa an’ny Tam-Tam Video, Media Consulting no nandray an-tanana ny seraserany. Ary akaikin’ny VivaTv sy ny VivaRadio koa ity kandidà ity, na dia tsy nisy filazana amin’ny fomba ofisialy aza izany.
Ny vokatra azon’ireo tompon’orinasan-tserasera kandida no manamafy izany: Hajo Andrianainarivelo, tompon’ny KoloTv sy KoloFm, faharoa amin’ny fampiasana ny haino aman-jery fa saingy fahatelo teo amin’ny vokam-pifidianana. Ny orinasany rahateo mbola ny eto Antananarivo sy ny manodidina ihany no afaka mijery azy. Eo koa i Edgard Razafindravahy. Lehiben’ny fahitalavitra sy onjapeo Rta, izay manana rantsana any amin’ny faritra telo, ankoatry ny onja-peo telo eto Antanananarivo. Fahefatra izy eo amin’ny fampiasana ny fitaovan-tserasera, ary dia 4% monja ny vato azony.
Ny Kandida Robinson kosa dia afaka niantehitra tamin’ny fahaiza manaon’ireo avy ao amin’ny ankolafy Ravalomanana izay nandray an-tanana azy. Na dia tsy manana ny fitaovana azony nampiasaina ankoatry ny Matv sy Mafm aza izy ireo dia mbola hita tamin’ny kalitaon’ny doka sy ny serasera nataony ny fahaiza-manaon’ireo mpiara niasa tao amin’ny Mbs taloha.
Ny fanazavana azo entina noho izany dia ilay antony faharoa: tsy mampiova ny safidy efa any antsain’ny olona any intsony ny doka be sy fanarahana ny vaovaon’ny kandida iray nandritra iny fihodinana voalohany iny. Efa samy nanana ny kandida nandrian’ny fony avokoa ireo mpifidy. Ka na nisy aza ny fanaovana litania ny mahasoa sy mahatsara kandida iray dia tsy mampiova ny heviny izany.
Fa tsy azo lavina koa fa tsy ny serasera amin’ny onja-peo sy fahita lavitra ihany no atao hoe fampielezan-kevitra. Fototr’izany ny fidinana any am-potony. Ny fifanatrehana sy firesahana mivantana amin’ny vahoaka mpifidy. Samy nanao izany avokoa ireo kandida rehetra. Io fidinana any am-potony io no nahazoan’ny kandida Ronbinson ny vokatra azony tamin’iny fifdianana iny. Ny rafitra mipetraka any amin’ny faritra ananan’ny ankolafy Ravalomanana sy ireo antoko manohana azy, ary indrindra ireo olo-tsotra mpanaradia ity filoha teo aloha ity no andry lehiben;ny fahombiazan’ity kandidan’ny antoko Avana ity. Io rantsana any amin’ny faritra io ny tsy nananan’ny Hary Vaovao, ka nahatonga azy nampiasa ny fahefam-pajakana sy ny onjam-peom-panjakana mihintsy mba haamafisana izany fototra izany.
Manan-danja ho an’ny mpifidy tokoa ireny fitetezam-paritra ireny. Mampiova ny safidiny ny fikasokasoan’ny kandida aminy. Nandringa ohatra ny vato azon’ny kandida Robinson tany amin’ny faritry Vatovavy satria tsy tonga tany amin’iny faritra iny ireo mpampiely hevitra noho ny fotoana tsy ampy.
Ankoatr’izay koa moa ny fahalalan’ny olona ny amin’ny ilay kandida. Ny kandida Martin Randriamampionona, dadafara, ohatra dia fantatry ny olona tsara any ambanivolo any noho ireo fitaovana fanamafisam-peo amidiny ka maro mpividy any. Maro koa ireo mahalala azy satria dia miparitaka any an-tokatrano tsirairy any ny sarin’ity kandida ity amin’ireny kaladrie ny manerana ny nosy. Nozarainy hatry ny voalohan’ny taona ireny. Izay no nahazoan’ity kandida ity ny anjara 3% azony.
Fihodinana faharoa: Samy manao izay ho afany.
Nanomboka ny 29 novambra ny fampielezan-kevitra. 21 andro ny ho faharetany. Miavaka ny amin’ity satria ankoatry ny fampielezan-kevitra ho an’izay ho filoha dia eo koa ny fampafantarana ny kandida ho solombavam-bahoaka.
Ny kandida roalahy ho filoha dia samy manana ny kandida solombavam-bahoaka manohana azy. Na dia nilaza fa tsy manana kandida solombavam-bahoaka kosa aza ny Hery Vaovao dia miaraka mampiely hevitra aminy ireo kandida avy ao amin’ny Miaraka Amin’ny Presidà Andry Rajoelina (Mapar). Hita sy tazana izany amin’ireny fitetezam-paritra ataony ireny. Mampiavaka ny fotoana ataon’ity kandida ity koa ny fiarahan’ireo kandida tsy lany tamin’ny fihodinana voalohany nanambara fa manohana azy. Misy dikany lehibe ny fijoroan’ireo kandida ireo eo anilany rehefa any amin’ny faritra nahazoan’ireny kandida ireny vato be. I Voninahitsy ohatra dia nahazo vato be tany Melaky, ka nampirisika ireo vahoaka nifidy azy mpa handrotsa-bato ho an’ny Hery Vaovao. Toy izay koa i Rajaonarivelo tany Marolambo sy Mahanoro. Nitarika ity kandida ity tamin’ny 25 oktobra ka nanome toromarika ny hifidianaireo nanome vato ho azy mba hanome izany ho an’ity kandida laharana faha-3 ity. Fa mihoatra noho ireo dia ny filohan’ny fahefana avon’ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina mihintsy no manotrona ny fampielezankevitry ny Hery vaovao sy ny Mapar.Tsy mandray fitenenana izy saingy tononina sy indraindraina noho ny an’ireo kandida ny anarany.
Fa mijoro eo anilan’i Robinson, kandidan’ny Avana koa nefa i Vital, nitarika tany amin’ny faritra Atsimo Andrefana. Eo koa i Saraha Georget filohan’ny Antoko Maitso. Mandray anjara fitenenana amin’ny fanentanana koa ity filohan’ ny antoko miaro ny tontolo iainana ityIty antoko ity dia manana fototra mafy any amin’ny faritany maro ary nanolotraa kandida ho solombavambahoaka. Ary mbola ao koa ireo kandida avy amin’ny ankolafy Ravalomanana.
Ireo kandida solombavambahoaka’ny ankolafy Ravalomanana.
Ampita sy ampafantarina amin’ny haino aman-jery avokoa ireny hetsika ireny. Ho an’ny Hery Vaovao dia misy mihintsy ny fampitana mivantana ireny amin’ny fahita lavitra TvPlus, MaTv, sy ny VivaTv. Iry voalohany dia manana maso ivoho any amin’ny faritra roa. Ity farany kosa dia vao avy nanitatra ny fampitany any amin’ny faritra atsimo sy any andrefana, na dia tsy azony atao aza izany hoy ny mpahay lalàna.Ny Tvplus no manao ny fampitana ka raisin’ny Matv sy VivaTv ny sary rehefa eto Antananarivo.
Ankoatr’ireo dia miavaka koa ny fampielezan-kevitra ho filoha amin’ity satria dia misy ny fampihaonana mivantana intelo ireo kandida ao amin’ny haino aman-jerim-panjakana.
Dimy andro sisa ny fampielezan-kevitraa ho amin’ny fifidianana izay ho mpitondra an’ny Madagasikara. Samy hanao izay tratry ny heriny ny rehetra.Hihaona amin’ny mpanao gazety avy ao amin’ny TvPLus ny Fat anio 15 desambra amin’ny valo ora,. Fihaonana ampitaina avy any Toliary ka ho raisina eto Antananarivo. Tsy mbola fantatra na ho fampielezan-kevitra io na tsia;..
Tags: Hery Rajaonarimampianina, Jean-Louis Robinson, MADAGASCAR, MaTv, mdg2013, TvPlus, VivaTvCategories: Média, politique